Bhati Kufambisa Kwevakaremara Vanhu - Kugeza Vakaremara Midziyo
A kuremara inobata mumwe muvanhu gumi pasi rese kana vangangoita mamirioni mazana matanhatu nemakumi mashanu. Kunyangwe mararamiro e vakaremara vanhu vanogona kunge vachinetsa, kune akawanda mhinduro kuita kuti kuvapo kwemazuva ese kuve nyore, nekushandisa kwe new kufamba zvishandiso zvaunokwanisa kutenderera zvirinyore uye kuita zvimwe zvakawanda.
Izwi kuremara haingosanganisi chete avo vasingakwanise kufamba kana kuona, asi inosanganisira avo vanhu vane Alzheimer's, muscular dystrophy ,, kukuvara kwehuropi, paraplegia, quadriplegia, sitiroko, Parkinson's, multiple sclerosis cerebral palsy, uye zvimwe zvinokanganisa. kufamba nekudyidzana.
Ava ndivo vanhu vanogona kuenderera mberi nehupenyu hwavo hwakajairwa ne kushandisa zvishandiso zvinovandudza kufamba ; vanogona kuramba vachinakidzwa nekushambidza mabhaidhi mushawa kana kunakidzwa mudziva, kana vachiri kufamba vakasununguka mupaki uye vanokoshesa zuva rine zuva.
Shower Chairs uye Seating
Bhati inzvimbo yekutarisisa kune avo vakaremara uye nemhuri dzavo. Vatarisiri havafanirwe kunetseka sezvo paine zvigaro zvekugezesa-shati zvinobatsira mukuchengetedza mashawa.
Aya macheya ekuremara akaremara anotaridzika semacheya chaiwo, zvisinei iwo ergonomically akagadzirirwa kuona kuti vashandisi vakasununguka uye vanotsigirwa zvakanaka panguva yekugeza. Chikamu chechigaro chingave chakaenzana kana chakakombama, zvisinei kana dhizaini inosanganisira yekuvhurika kwemvura yekumisa kuunganidzwa kwemvura kunogona kutungamira mukutsvedza.
Dzinouya dzakapetwa uye zvakajairika dhizaini, aya ekugezera macheya anosanganisira anokwanisa kuchinjika, akagadzika mawrestrests, epurasitiki akafukidzwa esimbi mafuremu uye anotsvedza-asingagadzirike rabha yakanamirwa makumbo. Macheya aya ari nyore kuchenesa nekuchengetedza, anouya nemarudzi akasiyana siyana uye machira, anotendera akasiyana masisitimu evashandisi, uye anotevedzera kune zvakajairwa mamiriro ehurumende.
Kune chero munhu arikuronga kunakidzwa nemadziva ekushambira, kune anotakurika akaremara pombi anosimudza. Iwo anotakurika akaremara dzimba dzinosimudza masimudziro akavakirwa kubvumira vakaremara vanhu kunyudza mudziva uye vagamuchire zvaro zvekudzorera (pamwe nekungonakidzwa kuri nyore).
Midziyo yekugezesa iyo Inobatsira Vanhu
Ichi chishandiso chinogadzirwa nechipfuramabwe chinobata munhu kuburikidza nerutsigiro rwechisungo chakanamirwa kune mamwe maketani. Chipfuramabwe uye chinotsigisa chinorembera padanda rakasimba, iro rakabatana zvakachengeteka nepamusoro pevhu kana mu-pasi chigadziko.
Mamwe mabasa anogona zvakare kutengwa, senge mawrestrests, tsika akagadzira machira, magaro ekudzikama, zvigaro zvepachigaro, bhatiri pack uye charger uye musana bhodhi kubatanidza. Dzimwe shanduro dzinobvumidza 360-degree kutendeuka kuti ishandiswe nyore nyore munzvimbo ipi neipi yedziva, inogona kutakura zvakaenzana mazana mana emapaunzi uye kuomerera kune ADA zvirevo.
Kune akawanda akawandisa michina anowanikwa anoshanda semidziyo yekuchengetedza uye rubatsiro kune avo vakaremara. Hazvina mhosva kuti iwe kana mumwe munhu waunoda ari kubata nehurema, kune hunyanzvi hwekuita kuti ako ezuva nezuva mabasa ave nyore kwazvo. Ita basa rako rechikoro uye utarise kuwanda kwemidziyo pamusika.